ALinks - socdaalka iyo ku noolaanshaha dibedda dhammaan
xiriiro waxtar leh
socdaal iyo ku noolaanshaha dibedda dhammaan
Asia iyo Pacific
Socdaal iyo nolol qof walba
Afghanistan (9) gargaar (10) Australia (17) Austria (12) Canada (20) Shiinaha (16) Colombia (6) Denmark (11) DR Congo (7) France (16) Germany (16) soo qaado (27) caafimaadka (29) Hong Kong (11) hotels (28) guryaha (15) Hindiya (78) Ciraaq (13) Italy (22) shaqo (72) Malaysia (12) Mexico (22) lacag (29) Nigeria (12) Norway (12) Pakistan (12) qaxootiga (37) Russia (14) Saudi Arabia (9) dugsiga (20) Spain (17) waxbarasho (34) Switzerland (7) Thailand (13) wax in la sameeyo (48) safarka (153) Turkey (25) UAE (13) Uganda (9) UK (54) USA (32) xiriiro waxtar leh (23) waxyaabo waxtar leh (109) Venezuela (12) fiisada (80)
Hagaha Buuxda ee Socdaalka 2021 - caraman.co.uk
Ka aqriso inbadan Safarka 2021-ka Caraman.co.uk
Sidee looga helaa fiisaha Kanada Albania?
June 18, 2021 Maitri Jha Albania, Canada, safarka, fiisada
Safarka turkey ee Singapore
June 16, 2021 Maitri Jha Singapore, safarka, Turkey, fiisada
Fiisaha Shaqada ee Uzbekistan
June 11, 2021 Antika Kumari safarka, fiisada
Sidee loo helaa fiisada ardayda ee Kanada?
Waxaa laga yaabaa 28, 2021 Maitri Jha Canada, waxbarasho, fiisada
Sidee loo helaa Shaqo Singapore?
Waxaa laga yaabaa 26, 2021 Antika Kumari shaqo, safarka, fiisada
Sidee loo helaa fiisaha dalxiis ee Mareykanka?
Waxaa laga yaabaa 25, 2021 Maitri Jha USA, fiisada
Sidee loo helaa fiisaha shaqada ee Kanada?
Waxaa laga yaabaa 24, 2021 Maitri Jha safarka, fiisada
Sidee shaqo looga helaa Kolombiya?
Waxaa laga yaabaa 17, 2021 Antika Kumari shaqo, safarka, fiisada
Wadamada ogolaanaya soo galitaanka suuriyaanka fiiso la’aan
April 29, 2021 alinks Suuriya, fiisada
ALinks, Xiriirinta Dibadda, safarka iyo ku noolaanshaha dibadda qof walba
Macluumaad bilaash ah iyo tilmaamaha safarka iyo ku noolaanshaha dibadda. Safar, baashaal, soo booqo ama wax ka iibso. Dhaqaaq, soo iibso waxyaabaha aad u baahan tahay, waxbarto, shaqeyso, iskuul aado, ama aad hesho daryeel caafimaad. Qodobadan madaxbannaan waxaa loogu talagalay qof kasta oo ka socda dhammaan jinsiyadaha. Waxaan ku hadalnaa luqado badan in ka badan soddon dal oo adduunka ah. Qaxootiga waa la soo dhaweynayaa!
Sidee shaqo looga helaa Delhi?
June 18, 2021 Shubham Sharma Hindiya, shaqo
Caasimadda qaranka ee Hindiya, New Delhi, waa mid ka mid ah magaalooyinka adduunka ugu horumarka badan, iyadoo leh koritaan wanaagsan. Natiijo ahaan, Delhi waxay soo jiidatay tiro badan oo khubaro caalami ah, maalgashadayaal, iyo shirkadaha caalamiga sanadihii la soo dhaafay. Qaar badan
Haddii aad ka mid tahay tirada sii kordheysa ee Albaniaanka ee ka fikiraya u guurista Kanada, xulashada fiisada saxda ah waxay kaa caawineysaa inaad xawaareyso hawsha ayna kordhiso fursadahaaga inaad ku guuleysato. Deganaanshaha joogtada ah ee Kanada waxaa suurtagal ah iyada oo loo marayo noocyo kala duwan
Sidee shaqo looga helaa Bombay?
June 16, 2021 Antika Kumari shaqo, waxyaabo waxtar leh
Mumbai dhexdeeda, waxaad shaqo ku heli kartaa ugu yaraan 24 saacadood gudahood. Ku rakib barnaamijka Apna oo buuxi astaantaada. Waxaad ka raadin kartaa shaqooyin in kabadan 70 qaybood markaad dhamaysato astaantaada, oo ay kujiraan Accounting, Admin, Back-office,
Booqashooyinka wax kayar 90 maalmood gudahood 180 maalmood gudahood markii ugu horreysay ee la geeyo Turkiga, dhammaan dadka haysta baasaboorka Singapore uma baahna fiiso. Sababtoo ah xeerarka fiisaha ayaa is beddeli kara wakhti kasta, waxaan kugula talineynaa inaad iska hubiso safarkaaga
RO-da ugufiican 10000
June 15, 2021 Shubham Sharma Hindiya, waxyaabo waxtar leh
Maaddaama aan wada ognahay sida ay muhiimka u tahay in la cabo biyo ku filan si loo helo nolol caafimaad leh. In kasta oo shakhsiyaad badani ay leeyihiin biyo qaybiyayaal ku jira qaboojiyaha, in kasta oo qaar ka mid ahi ay weli ku tiirsan yihiin biyaha qasabadda wanaagsan Hadaad
Bangiyada ku yaal Uzbekistan
June 15, 2021 Antika Kumari waxyaabo waxtar leh
Uzbekistan waa wadan ka tirsanaan jiray Soofiyeeti bartamaha Aasiya. Masaajiddada, qabuuraha, iyo goobo kale oo xiriir la leh Silk Road, oo ah waddo ganacsi oo taariikhi ah oo isku xirta Shiinaha iyo Badda Dhexe, waa la yaqaan. Registan, oo ah fagaaraha ay garaaceen seddex qurux, diimeed oo daboolan oo muusig ah
Maaddada xagaaga ee ugu fiican ee maqaarka dufanka leh
June 15, 2021 Maitri Jha waxyaabo waxtar leh
Haddii aad leedahay maqaar dufan leh, budada ama muraayadaha qorraxda ee ku saleysan jel ayaa ah xulashooyinka ugu fiican. Isticmaal mid ka sii digaya haddii aad leedahay maqaar qalalan. Iyada oo ay u dhaxayso 15, 93% ilaa 97 boqolkiiba falaadhaha qorraxda. Si kastaba ha noqotee, iyadoon loo eegin
Toner-ka ugufiican xagaaga maqaarka u nugul maqaarka
June 14, 2021 Maitri Jha waxyaabo waxtar leh
Khabiirka ayaa yidhi "toners-ka salicylic acid waxay ku fiican yihiin maqaarka saliida leh ama u nugul finanku". Haddii aad leedahay maqaar qalalan, toners glycolic acid ayaa laga yaabaa inay kaa caawiyaan inaad hesho fuuq-baxa iyo soo-baxa aad u baahan tahay. Ugu dambeyntiina, haddii maqaarkaagu runtii yahay mid xasaasi ah, toner
Sidee shaqo looga helaa Iran? Halkan hubi!
June 13, 2021 Karuna Chandna Iiraan, shaqo
Iran waa wadan ku yaal Galbeedka Aasiya. Afka rasmiga ahi waa Beershiya. Hoos waxaa ku yaal xulasho kheyraad ah oo lagu raadinayo fursado shaqo shisheeye ahaan Iiraan. Ma u baahanahay fiiso Iiraan? Dadka soo booqda Iran waa inay fiiso ka helaan hal
Sidee shaqo looga helaa Amsterdam?
June 11, 2021 Maitri Jha Amsterdam, shaqo
Haddii aad horey u haysatay ruqsad shaqo oo aad uga shaqeysid Amsterdam markaa waad iska dhaadhacsan kartaa si aad u aragto sida shaqo looga helo Amsterdam. Haddii aadan haysan rukhsad shaqo, waxa ugu horreeya ee aad u baahan tahay inaad sameyso
1 2 3 ... 68 Xogta ku xiga»
Mawduuca WordPress: Gridbox by Dulucda.